Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Waa Maxay Nooca Qashin-qubka Jinkayga Ayaan U Rabaa Jikadeyda?
2020 / 10 / 27 QoondayntaTilmaamaha qasabada 982 0
Hadda tani waa su'aal aad u wanaagsan. Haddii aad tahay nin ama naag jecel inaad waqti badan ku qaadatid jikada, hal shay ayaa jira oo aad ogtahay. Ka dib markaad u kariso saacado badan qoyskaaga ama asxaabtaada, waxaad u baahan doontaa inaad wax walba nadiifiso. Ma jiraan wax ka xun inaad saacado ku qaadato inaad xoqdo taarikada iyo weelasha ka hor intaadan awoodin inaad nasato maalintaas.
Iibsiga Qalabka Jikada ugu Fiican
Waxa ugu horreeya ee aad doonayso inaad sameyso waxay noqon doontaa inaad ku qalabeyso jikadaada qasabad qasab ah. Tani asal ahaan waa nooca qasabada biyaha aad rabto inaad u iibsato jikadaada. Pulldown qasabadaha ayaa in mudo ah soo jiray waxayna cadeeyeen inay aad iyo aad waxtar u leeyihiin markay tahay fududeynta nolosha jikada.
Haddii aad la yaaban tahay nooca qasabadda pulldown ee aad rabto inaad doorato markaa waxaad marwalba aadi kartaa madow tubada jikada taasi waxay lahaan doontaa ikhtiyaarka pulldown. Dabcan, matoor madow oo hoos u soo jiidaya qasabadda jikada ayaa dhab ahaantii noqon karta ikhtiyaarka kuugu fiican. Iyagu waa xarrago, waa madow taas oo macnaheedu yahay in ay la socdaan wax walba iyo, matte dhab ahaantii ma ahan wax aad u fudud in la nadiifiyo sidaa darteed, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad u tagto xulashadaas.
Qasadee ayaad Dooran doontaa?
Dabcan, waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho qiimo badan oo kala duwan noocyo badan oo kala duwan. Haddii aan u qaadanno inaadan dhab ahaan khabiir ku ahayn tuubbooyinka jikada waxaa gabi ahaanba macquul ah in loo maleeyo inaad u malayn karto qasabad jikada oo rakhiis ah oo leh nidaamka 'pulldown system' inay u fiicnaan doonto sida mid qaali ah. Waa hagaag, runtii waad khaldami kartaa kiiskan gaarka ah.
Kuma talineyno inaad ubaahantahay inaad ka iibsato qasabada jikada meesha ugu qaalisan si aad tayo fiican uhesho. Si kastaba ha noqotee, xulashooyinka ugu jaban ee suurtogalka ah ayaa laga yaabaa inaysan dhab ahaan ahayn waxa aad u baahan tahay inaad raadiso. Asal ahaan, waxaad ubaahantahay inaad sameyso waxay noqoneysaa inaad diirada saarto qasabad leh dib u eegis wanaagsan kadibna aad bilawdid isbarbar dhiga qiimaha. Laga yaabee, waxaad awoodi kartaa inaad hesho badeecad ka raqiisan oo dib u eegis wanaagsan lagu sameeyo ama, waxaad u baahan kartaa inaad u baahato wax qaali ah. Arrin kasta ha noqotee, iska hubi inaad iibsanayso waxa ugu fiican.
Hore:: Jiko Casri ah adiga ayaa kuu dhuuqeysa Next: Faa'iidooyinka Matte Black jiido Down Jikada qasabad